Amava endalo kwindlu yendalo - I-Airbnb
Amava endalo kwindlu yendalo
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguValentina
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uValentina iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Phinda uqhagamshelane nendalo kunye nale ndlela yokubalekela engenakulibaleka. Vukani nive ingoma yeentaka, phakathi kwezidiliya zaseKoloni Estrella. Sakha indlu ngokhuni kunye nodongwe, ngokuhlonipha imigaqo ye-permaculture ukuze siphile ngokuvisisana noMhlaba.
Ijikelezwe zii-wineries, iindawo zokugcina zasemaphandleni ezineemveliso ezivela kwi-km 0 kunye neendawo zokutyela zelizwe. Imizuzu eyi-7 ngemoto ukusuka kumbindi weCarmelo, i-10 min ukusuka elunxwemeni lwe-spa kunye ne-15 min ukusuka kulwandle lwaseSeré.
Isidlo sakusasa sifakiwe.
Ziphathe ukuze uphile la mava.
Malunga nendawo yokuhlala:
Indlu yeViva ephefumlayo nengathi yindalo, idinga uthando kunye nokukhathalelwa.
Iquka isidlo sakusasa esamkelekileyo esenziwe ngezandla kunye neziqhamo zasekuhlaleni.
Ikwimela encinci eColonia Estrella, indawo esezilalini elungiselelwe ukulima umdiliya, ejikelezwe yindalo nomoya omtsha. Ukucula nokucula amakhulu eentaka.
Umbono omhle we-Rio de la Plata.
Iindawo ezikufutshane ezolileyo nezikhuselekileyo.
Umntla ujongene, unokukhanya okuninzi.
Ii-sunris ne-sunsets ezinemibala emininzi.
Yakhiwe ngenxa yenkcubeko, i-bioclimate kunye nezinto eziphilayo.
Ifowuni ene-inshorensi entle.
Umgangatho ongaphantsi Igumbi
elikhulu lokuhlala-indawo yokujonga izinto ukuze ukonekte i-laptop yakho ngefowuni, izixhobo zomculo ezisemgangathweni, ukutshintshiselana ngeencwadi, ilaphu lomoya elifumanekayo.
Ikhitshi eline-blender, i-mixer, i-blender, i-shredder, i-toaster, umphandle wombane, umatshini wokwenza ikofu waseItali, iketile, imbiza ekhawulezayo, ipani, iimbiza zeti, izinto zokuhombisa, i-crockery, iiglasi, iikomityi neeglasi zewayini.
Igumbi lokuhlambela eliyihafu.
Ibhari/ibhari yesidlo sakusasa ukuya empuma.
Igumbi lokuhlala elinesitulo sokuhamba ngesikhephe esibheke kumantla.
Indawo yokwamkela iindwendwe enehengari.
Igumbi lokuhlambela elipheleleyo eline-shower elungele indalo: ishawa yakudala (ibhakethi eline-rosate) kunye nedreyini esebenza njengendawo emanzi enezityalo.
Igumbi eliphambili elinebhedi elala abantu ababini enobubanzi obuyi-190x cm kunye nokuphuma ukuya kumgangatho ophezulu osetyenziswa nangabanye abantu ojongene noMlambo, phuma uye kwi-terrace ukuya empuma, kunye nedesika enkulu yomsebenzi kunye nendawo ye-yoga.
Idesika encinci okanye igumbi elinye elinesilingi ephantsi, elinomatrasi waphantsi uze uphume kumgangatho ophezulu osetyenziswa nangabanye abantu, kunye nefestile kunye nendlela eya kwiRío de la Plata.
Igumbi lokuhlamba iimpahla langaphandle elinentambo yokuxhoma iimpahla emgangathweni.
Iveranda enezitulo netafile yokutyela.
Ishawa engaphandle. Igadi enentaba engcwele apho unokuxhoma khona i-hammock, indawo eluhlaza yeepikniki zangaphandle
okanye udlale engceni nakumngxuma womlilo ongasemva: 500 m2.
isofa ekwayibhedi eyi-1, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1
Yindawo yasemaphandleni ebukekayo, enezidiliya, iindawo zokugcina iimpahla zasemaphandleni, iindawo zokutyela zasemaphandleni, iindawo zewayini kunye nabemi abambalwa.
Kwibhloko enye kwicala elichaseneyo, kukho iChapel yaseSan Roque eyakhiwe ngabahlali njengomnikelo kwingcwele ukuba ibaphilise kwisigulo.
3km ukujikeleza kukho indalo eninzi, iintaka ezininzi. Eyona nto inomdla kakhulu, imigibe yeempuku, iingcungcu kunye neentaka ze-oveni zisondela mihla le zide zangena endlwini.
Ummandla wonke ulungele ukuhamba okanye ukukhwela ibhayisekile.
Uninzi lwabemi luhlala apha ubomi babo bonke, kunye neenkomo, iihagu namahashe, besebenza umhlaba.
Abahlali bokuqala babengamaBasque kunye namaFrentshi, ngoko kukho izidiliya ezininzi kunye nokulima. Iindawo zokuthengisa iwayini, iindawo zokutyela kunye neendawo zokugcina iimpahla zasemaphandleni zisandula ukuvela ngenxa yale njongo.
Ndinxibelelana ne-whatsapp okanye ngetelegram, kunye ne-instagram okanye i-imeyile ukukuxelela into ofuna ukuyazi malunga neprojekthi okanye indawo. Ngoku ndihlala ngaphandle kwelizwe, ngoko siyarenta le ndlu kwaye umama uza kube ekhona ngokobuqu.
Ndinxibelelana ne-whatsapp okanye ngetelegram, kunye ne-instagram okanye i-imeyile ukukuxelela into ofuna ukuyazi malunga neprojekthi okanye indawo. Ngoku ndihlala ngaphandle kweli…